Fandrafetana Loko Fandriana - Ataovy Tsara Kokoa Ny Torimasonao Amin'ny Alàlan'ny Fisafidianana Loko Miloko Tsara - Bedroom Colour Schemes
Fandrafetana Loko Fandriana – Ataovy Tsara Kokoa Ny Torimasonao Amin’ny Alàlan’ny Fisafidianana Loko Miloko Tsara
Fantatrao ve fa ny lokon’ny rindrin’ny efitrano fandraisam-bahiny dia misy fiantraikany lehibe amin’ny kalitao? Ankoatr’izay afaka manome rivo-piainana mahafinaritra, ny fisafidianana ny loko hoso-doko ao amin’ny efitrano fatoriana dia mety hisy fiantraikany amin’ny fahasalamana ara-pihetseham-po.
Ny efitrano fatoriana miaraka amin’ny fiasa lehibe ho toerana fialan-tsasatra aorian’ny andro mampihetsi-po ary tsy mahatsapa izany dia lasa toerana ahafahana mampihena ny ‘harerahana ara-pihetseham-po’, mangetaheta, na toerana hamakiana boky na hijery fahitalavitra nefa mandry nefa tsy misy. manelingelina ny hafa.
Mampalahelo fa maro no tsy mahalala ny fomba fisafidianana loko hoso-doko mety amin’ny loko ao amin’ny efitranony. Ny ankamaroany dia ny loko voafidy no loko tianao / ankafizina na fotsy miaraka amin’ny antony madio na mazava. Raha ny marina, ny loko tsirairay dia manana endrika hafa. Ny safidy ny loko izay tsy mety dia miteraka fahasosorana, fiantraikany amin’ny fihenan’ny toe-po, ary aza mamela anao tsy hiala sasatra satria ny loko dia namporisika ara-tsaina.
Torohevitra momba ny loko milina natokana ho an’ny efitra fatoriana rindrin’ny rindrina
Ireto manaraka ireto ny lokon’ny efitrano fandraisam-bahiny izay nofidianay hanampy anao amin’ny fialan-tsasatra moramora kokoa.
Fandrafetana loko fandriana # 1: Maitso
Ny loko maitso dia inoana fa manome fahatsapana efitrano voajanahary kokoa hahafahany manome rivotra tsara ao anaty efitrano. Ny loko mifandray amin’ny loko voajanahary, toy ny ravina, ahitra, ny rivotra iainana dia mahatonga ny habakabaka amin’ny efitra ho lasa milamina sy milamina.
Fidio ny ravina maintso, ny maitso maitso na ny volo-maitso. Ny loko milamina sy tsy mampitony mba handokoana io rindrina io ankoatry ny fitoniana dia manampy ny atidohan’olombelona hahatsapa hamelombelona haingana kokoa rehefa mifoha aho. Ny vokatra dia resin-tory milamina kokoa ary mamela ny hakamoana rehefa taitra mifoha ary mahatonga anao hahatsapa ho malefaka kokoa ary mihalehibe.
Fandrafetana loko fandriana # 2: manga
Ankoatra ny maintso dia afaka misafidy manga ianao ny loko izay maneho ny natiora. Ny manga manga sy ny volo manga na ny mena ary ny mena dia hitondra anao toy ny any an-dranomasina. Ny fahatsapana voajanahary, madio, marevaka ary mahafinaritra izay entin’ity loko ity dia hahatsapa ho tsara ny torimasonao.
Tahaka ny maintso, ny fampiharana ny loko miloko manga miaraka amin’ny manga dia afaka manome rivo-piainana tsara ihany koa. Na dia tafiditra ao anatin’ireo loko afaka manandratra ihany aza ny manga dia mitondra fihetseham-po mangatsiaka mba mora hatory mora kokoa.
Fandrafetana loko fandriana # 3: beige
Beige, izay fitambatra volontany sy fotsy, dia tafiditra ao anaty loko malefaka sy milamina. Ity loko ity dia mety mahatonga ny olona izay ao anaty azy hahatsiaro tena milamina ary afaka mahazo aina tsara. Tsy mahagaga raha ity loko ity dia ampiasaina betsaka any amin’ny hotely kintana mba tsy hahatsiaro azy ireo ao an-trano.
Fandrafetana loko fandriana # 4: Grey
Afangaro ny lokon’ny volo amin’ny rindrina misy gorodona vita amin’ny hazo, avy eo ny efitrano iray izay mahatsapa hafanana sy mahazo aina no hanatsara ny kalitao amin’ny fitsaharanao. Na dia tafiditra ao amin’ny loko mavitrika sy maoderina, ny fisafidianana ity loko ity ho ny lokon’ny efitrano fatorianao dia afaka manome fahatsapana malalaka sy madio. Izy io dia mety amin’ny efitra fatoriana kely.
Ankehitriny, iza no heverinao fa ny loko loko amin’ny rindrina izay hofidinao? Eny eny, tadidio fa hahazoana atmosfotra milamina ao amin’ny efitrano fatoriany, dia ny zavatra voalohany tokony hatao dia ny manitsy ny lokon’ny efitrano fatoriana miaraka amin’ny fisafidianana loko mety. Aza manao loko na loko miloko maizina satria hamorona fahatsapana tsy mahasoa.
Torohevitra toro-hevitra ho an’ny famoronana efitra fatoriana milamina miaraka amin’ny tetika loko fandriana
Alohan’ny hahafantaranao ny lamin’asan’ny efitrano fandraisam-bahiny izay tsara ho an’ny fahasalamana, aloha, fantaro ireo torohevitra momba ny famoronana efitrano fandraisam-bahiny ambany eto ambany. Ny efitrano iray azo antoka dia manana atitany izay amboariny tsara, ao anatin’izany ny fifantenana loko loko sy fanaka ilaina. Ireto misy torohevitra vitsivitsy azo ampiharina hamoronana efitrano tsara.
Misafidiana loko izay manana fahatsapana mampitony fa tsy tazomina tsy ho taitra ianao ary hiaina tsy fahita amin’ny tsy fahita.
Manaova fahatsapana malalaka, na dia manana habe tsy lehibe loatra aza ny efitrano.
Misafidiana ny lalao mifanandrify amin’ny loko loko sy fanaka ao amin’ny efitrano. Ny loko tsy miandany izay mifanentana amin’ny loko rehetra dia tsara kokoa.
Aza manangona zavatra be loatra ao anaty efitrano. Misafidiana entana izay mandeha sy ilaina ao amin’ny efitrano.
Rehefa mifoha ianao amin’ny maraina, ny loko mavo dia mety manampy anao hanomboka amin’ny andro amim-pahazotoana. Ity koa loko ity dia hitazona anao amin’ny adin-tsaina. Fidio ny loko mavo malefaka malefaka mba tsy hahasosotra anao ny alina.
Raha ny marina, tsy misy fandalinana intsony momba ny loko loko miloko izay mety ho an’ny fahasalamana. Ka mety ho hafa ny vokatry ny loko eo amin’ny olona tsirairay. Na eo aza izany, safidio ny loko mahatonga anao milamina sy mahazo aina ka tsy mahita olana amin’ny torimaso ary tsy ho voaelingelina koa ny fahasalamanao.
Ny loko dia tena mifandray amin’ny tsirony ka izay rehetra azo antoka dia samy manana ny safidy hafa. Raha tsy tafiditra amin’ny loko mety mamorona fahatoniana ny loko tianao, dia amboary ny safidy amin’ny efitrano fandraisam-bahiny hafa. Ny loko calmer dia mety hanjaka, saingy tsy midika izany fa tsy tokony hisy loko hafa afaka mamelona ny efitrano. Noho izany, dia mankafiza ny mandinika ny kinova tsara indrindra amin’ny alàlan’ny fandokoana fandriana!